Xavi Ayaa Yidhi: "Ousmane Dembele Waa La Iibin Doonaa Bisha Janaayo Haddii Aanu Qandaraaska Dib U Cusbooneysiinin"..
HomeChampions LeagueXavi ayaa yidhi: “Ousmane Dembele waa la iibin doonaa bisha Janaayo haddii aanu qandaraaska dib u cusbooneysiinin”..
Xavi ayaa yidhi: “Ousmane Dembele waa la iibin doonaa bisha Janaayo haddii aanu qandaraaska dib u cusbooneysiinin”..
January 20, 2022 Champions League, Horyaalka France, Wararka Ciyaaraha 0
Tababaraha Barcelona Xavi ayaa sheegay in kooxdiisu ay iska iibin doonto Ousmane Dembele ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha Janaayo hadii uusan heshiis cusub u saxiixin Camp Nou.
Qandaraaska xiddiga heerka caalami ee dalka France uu kula jiro kooxda Catalan ayaa ku eg dhamaadka bisha June, waxaana la rumeysan yahay in labada dhinac ay weli ku kala fog yihiin dalabaadkooda.
Wakiilka Dembele Moussa Sissoko ayaa sheegay in Barcelona ay si tartiib tartiib ah u wayso gooldhaliyaha ku guulaysta koobka aduunka, Juventus iyo Manchester United ayaana loo maleynayaa inay ku tartamayaan beeca xorta ah.
Xavi ayaa sheegay in kooxdu ay haatan u baahan tahay inay ogaato in 24-sano jirkaan uu qalinka ku duugi doono heshiis kordhin iyo in kale, iyadoo uu bisha Janaayo ka tagi doono weeraryahanka.
“Ma doonayo inaan cidna ixtiraamo, fariintu waa caddahay: ama wuu cusbooneysiinayaa ama wuxuu eegayaa inuu ka tago [kooxda],” Xavi ayaa u sheegay suxufiyiinta. “Ma ahan xaalad fudud ama lagu farxo, laakiin danta kooxda ayaa muhiim ah.
“Waxaan ku jirnaa xaalad adag, haddii uusan dib u cusbooneysiin, kooxdu waa inay xal u hesho, kuma jiri karno xaaladan, waxaan sugeynay waqti dheer, [Agaasimaha Isboortiga] Mateu [Alemany] ayaa ku sugnaa wadahadalo [wakiilka Dembele] muddo shan bilood ah, wax intaa ka badanna ma sugi karno.
“Wuxuu ii sheegay inuu doonayo inuu sii joogo. Weydii isaga [sababta uu u cusbooneysiin waayey weli].”
Dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Dembele uu dalbanayo heshiis uu Barcelona ku qaadanayo 700,000 oo gini isbuucii, iyadoo dalabka xiddiga reer France la sheegay inuu ka naxay Xavi.